Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo cRaxmaan Yamani – Radio Daljir
Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo cRaxmaan Yamani
Abriil 27, 2017 1:51 b 0
Waxaa la ciyaaray kulamo ka tirasan horyaalka Ingiriiska, waxna iskama badalin hoggaanka Horyaalka. Maanta waxaa la ciyaari doona kulanka Derby Manchester.
Waa mar kale iyo Saaka & Xubintii Ciyaaraha iyo Cabdiraxmaan Yamani oo ku sugan xarunta Daljir Bossaso. Yaa badiyey, yaa laga badiyey, maxaa se ka cusub naadiyada ciyaaraha adduunka? Halkan kaga bogo oo hoos ka dhegayso warbixintii koobnayd ee Yamani iyo Saaka & Xubintii Ciyaaraha!
Hoos ka dhegayso
Gaalkacyo: Fursad Shaqo – ADESO Sarkaal Maaliyadda iyo Maamulka
Caawa iyo Daljir iyo Axmed Sh Maxamed Tallman (DHEGAYSO)